umculo — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Ukuze ukudlulisela isigidimi sakhe, Uhambo wathabatha indlela eyahlukileyo zokurekhodisha Lento kwixesha. Kunokuba isebenzisana abavelisi ezininzi, wasebenza kuphela kunye umvelisi elide Gawvi lonke yelicwecwe e Atlanta studio yakhe. Sonically, enye kuqala Vuka ngayo “Shweet” ibonisa italente omkhulu bobabini Gawvi kunye Trip Lee. Kunye nemveliso yayo ebilayo, ke wanqwala Sisendleleni odidi ngasemazantsi Houston ku baleka kunye New York-style kwamabali. vesi Uhambo zisala ezinamandla njengoko kubalulekile. Ngelo, “Uloyiso Sweet” yakha yivesi encinci ibe umlobothi isityholo nto ezihlaziyayo ngephanyazo njengoko flow ezosulelayo Uhambo buza kubamba. “Manolo” ambone kwakhona kwiqela kunye Records Reach’ eyakhe indoda eziphambili umhlobo Lecrae. Kunye, babini kubo isigcini omnye wesiqhelo hip-hop zabuqhinga, phakathi zitaka imvano kwimicu.
Yelicwecwe ivula kunye New Amaphupha, Sakunazisa J.R. kwaye Sho Baraka, leyo 'emaqandeni leyinene ukuba nokusukelana kuzingca kuya nobomi obuphuphumayo UThixo Esinqwenelela sonke. Uhambo lulandelayo kunye nokhululekileyo imihobe Robot ?? kwaye mna Good ebonisa Lecrae, leyo uqhayisa inkululeko, ulwaneliseko nokhuseleko ezifumaneka kuKristu. On Fantasy ??, Sakunazisa Suzy Rock, Uhambo ubhenca ngenyameko ihlabathi iphupha thina nokuba bahlala okanye elide kunye yabaxhasi kuya kuthi ukuba. Okunye ukudibana kunye KB, andy Mineo, Jimmy Needham, V. Rose kunye nabanye abaninzi, ukubhiyozela ubuhle ubomi eziziswe lulawulo Mkhululi oyinyaniso, umdali kunye ngumtyhili konke okulungileyo. Nangona imveliso evela Dirty Rice, alex Medina, G-iZimbo noYosefu Prielozny zinika esimnyama elizukileyo ngokwanelisa lobomi kuKristu.
INdoda Up album, ngokusebenzisana iphulo Man Up, ufuna ukuphendula loo mbuzo ezifundisa elinesandi yintshukumo! Lecrae, Trip Lee, Sho Baraka, Tedashii, Pro, KB no Andy Mineo nibiza amadoda inkcubeko Hip-hop ukuba yindoda yokwenene yezibhalo inokuchazwa ngokuthi: nesibindi sokukhokela, passivity ngokugatya, ukwamkela uxanduva lwezinto ukuthobeka, ngenxa inguquko nokholo kuKristu.
Trip Lee uzifumanisa elisoloko nzima, kodwa ekugqibeleni elithembisayo karhulumente–obumiselwe ubomi obungunaphakade, kodwa umsebenzi kokulawula ngapha lo. icwecwe lakhe wesithathu, Phakathi Ababephila inika abaphulaphuli ingqokelela mbongi zobuqu kuvumelana ovuyo kwemizabalazo sonke amava njengoko amakholwa. Isihloko yokuvula lwengoma, Real Life Umculo,?? lushwankathela nomawukulindele projekthi zakutshanje Uhambo ngayo.
Ngaba ubone ngokucacileyo? Buyela Umva wesibini disc, Trip ULee ngo kuthunywa ukuba kumbona uThixo ngokucacileyo ngokusebenzisa yilensi isibhalo, Ndininika 20/20 umbono. Sakunazisa eningenakukholwa, imveliso ezahlukeneyo, kunye nezinye iimpawu ukusuka Lecrae, Tedashii, shai linne, kunye nabanye.
Debut Uhambo kuLee Album! Eli lungu abancinane unashamed ye 116 Clique wabeka phantsi ubushushu ezinye esinzulu “Ukuba Bebesazi”. Akufuni kuphoswa ngeli. Trip Lee nethetha Makhesenze imiba eyahlukeneyo ukuba nazo uhambe yakho kunye noKristu, ukusuka kwindlela sifanele sihlolisise ubomi bethu kwezinye imfundiso enobuzaza umntu ye2 Emnye. Qinisekisa ukuba zegosa le CD kumba kwi lyrics. Uye weva Trip Lee ngomhla 116 Clique Compilation Album kwaye ngoku ungafumana le makanenzele zokwenyani ekukhululweni yokuqala yakhe ngokupheleleyo ubude kunye imveliso yi Tony Stone, UJ, Lecrae, kunye nokuninzi, kunye kwezinye izinto ezinkulu ngokuthi uNozakuzaku, Lecrae, Tedashii, Flame nabanye!